Ihe ị ga-ahụ ma mee na Prague maka izu ụka | Akụkọ Njem
Ihe ịhụ na ime na Prague
Prague Ọ bụ otu n'ime ezigbo ebe ịga njem ma hụ maka ngwụsị izu. Ihe isi obodo Czech Republic achọta ya n'akụkụ osimiri Vltava ma nwere gburugburu 1,2 nde bi na ya. Otu n'ime ebe nkiri nke obodo a doro anya na ọ bara ọgaranya na-ewu ụlọ, yabụ n'ọtụtụ ebe anyị ga-akwado ka ị hụ ma gaa ga-emetụta okwu ngosi nka, nke ewusiri ike site na afọ dị mkpa nke akụkọ ntolite.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe ịhụ ma mee na Prague na nke bụ ebe kachasị atụ aro maka izu ụka izu ụka, anyị ga-agwa gị n'okpuru.
1 Akwa Charles
2 Castlọ Prague
3 Igwe kpakpando
5 Cinglọ Egwú
6 Meto Star
Àkwà mmiri a bụ otu n’ime ihe nnọchianya kachasị mma nke obodo ahụ, nke mere ka ọ bụrụ ihe dị mkpa mgbe ị gara Prague. Akwa wuru na okwute e si na XIV narị afọ, ya mere onodu nchekwa oma jiri buru ihe ijuanya. Àkwà mmiri a bụ ọrụ maka ịbanye na etiti abụọ nke obodo ahụ, ya mere enwere ike ịsị na ọ bụ isi akwara dị na etiti Prague.
Ihe ejiri mara mma na mma nke akwa a bụ nke ya Ihe oyiyi 30 baroque, nke dị ogologo ma na-enye ụfọdụ agwa na mmụọ ochie na mpaghara ahụ. Oge kachasị mma iji gaa na akwa mmiri a ma hapụ ya ka ọ ghara ịnwụ anwụ na otu ma ọ bụ karịa foto anyị, bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọdịda anyanwụ, nke na-abụkarị oroma na ocher na ụbọchị ọma.
A na-ahụta Prague Castle dị ka ogige kachasị elu na ụwa, ọ bụghị naanị na ọ ga-abịa site na mpụga maka nnukwu ihu ya, mana ọ bụkwa ihe na-achọsi ike ma na-atọ ụtọ ileta maka ime ya: enwere veranda nke nka oge ochie, ya Katidral Gothic nke St. Vitus, Wdg
Lọ a bụ ulo nke ndi eze na ndi eze ta emehekwa g'ẹphe dụ mma. A nnukwu ụlọ hụrụ, enweghị obi abụọ.
Na square obodo ochie, Anyị hụrụ elekere mbara igwe a magburu onwe ya. More karịa a dị mfe elekere na-agwa awa, nkeji na sekọnd, ọ bụ ezigbo ọrụ nkà e kere na mmalite nke XV narị afọ. Ọ nwere usoro kpụrụ atọ quadrants, nke mara mma vibrant agba (acha anụnụ anụnụ, odo, ọlaedo, wdg) nke ị nwere ike ịhụ ọnọdụ nke anyanwụ na ọnwa, yana ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na-anọchi anya 12 ndịozi na ọnwa nke afọ. Ihe oyiyi ya anọ dị n'akụkụ na-anọchi anya mmehie isi obodo ma rụọ ọrụ site n'inye oge ọ bụla na oge awa ahụ.
Un nnukwu ọrụ nke injinia na ị ga - ahụ naanị na Prague.
Malá Strana ma ọ bụ "Obere agbata" ọ bụ ihe ọ bụla ma obere. Gagharị n'okporo ámá ya bụ ịchọpụta ebe ọtụtụ ndị ọdịbendị na ọdịnala dị iche iche gara. Otu n'ime ebe nkiri nke ebe a bụ Chọọchị San Nicolás, ụlọ baroque jupụtara na ihe osise mara mma na frescoes. I nwekwara ike ịtụgharị uche na nnukwu ngwa na Mozart ọ na-egwuri egwu n'oge ọ nọ n'obodo ahụ.
Naanị n'ógbè a ka ị ga-anọru awa ole na ole, ọbụlagodi.
Czech-Croatian Vlado Milunic na American superstar Frank Gehry kere ihe ukwu a nkà nke oge a (n'etiti 1992 na 1996). Ọ dị mkpa karịsịa ma ọ bụghị na-ahụghị ya n'ihi kpam kpam na oke agbaji na sobriety na baroque nke oge gboo ije gburugburu na mpaghara ahụ, ya mere ọ gaghị ewe oge ịchọta ya.
Ihe owuwu nka di iche nke kwesiri nleta gi.
Ọ bụ maka "Obodo ochie", a agbata obi oge ochie na n'akụkọ ihe mere eme niile ahụwo ndị njem si n'akụkụ ụwa niile ka ha na-agagharị n'okporo ámá ya. Ọ dị ka ụdị labyrinth nke anyị nwere ike ịchọta obere n'okporo ámá zoro ezo, uzo dị iche iche na ụka na n'ámá (ebe anyị na-achọta elekere mbara igwe), wdg.
Obodo Ochie ga-esonye na ihe iri iji hụ ma mee na Prague na enweghị obi abụọ ebe ọ bụ isi obodo.
Ọ bụrụ na ọnụnọ gị ga-abụ ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ, ị ga-enwe ike ịhụ Prague kacha mma mana ọfụma ma n’ụzọ kpụ ọkụ n’ọnụ, ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na-atọ ụtọ dị n’obodo ahụ. Ọ bụ obodo zuru oke iji hụ na ngwụsị izu.
Kedu mgbe mgbaba ọzọ ga-abụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Prague » Ihe ịhụ na ime na Prague
Ezumike ezumike dị ọnụ ala na Bora Bora
Obodo dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ọnụ na Europe ịga leta